Orinasa mpamonjy rano - Sinoa mpamonjy rano rano mpamokatra, mpamatsy
1.OverviewNy lozisialy fiainana an-tsokosoko fanaraha-maso tsy misy tariby dia robot manavotra aina ambonin'ny tany izay azo alefa lavitra. Izy io dia azo ampiasaina betsaka amin'ny famonjena ny rano latsaka ao amin'ny dobo filomanosana, fitoeram-be, renirano, morontsiraka, yachts, sambo, ary tondra-drano. Ny fanaraha-maso lavitra dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso lavitra, ary ny fandidiana dia tsotra. Ny hafainganam-pandeha tsy ampiakarina dia 6m / s, izay afaka mahatratra haingana ilay olona nianjera tao anaty rano hamonjy. Ny hafainganam-pandehan'ny olona dia 2m / s. Misy hi ...
Topimaso Ny robot fanaraha-maso ROV-48 Rano mpamonjy rano dia robot fikarohana kely sy lavitrisa fanaraha-maso rano lavitra ho an'ny famonoana afo, izay ampiasaina manokana amin'ny famonjena ny faritry ny rano amin'ny seho toy ny tohodrano, renirano, morontsiraka, sambo ary tondra-drano. Ao amin'ny asa famonjena nentim-paharazana, ny mpamonjy voina dia nitondra ny sambo sambo mpisitrika na mandeha manokana mankamin'ny toerana fitetezana rano mba hamonjy. Ny fitaovana famonjena lehibe indrindra dia ny sambo an-dranomasina, tady fiarovana, palitao, vodin'aina, sns ...
Fampidirana ny robot anaty rano, antsoina koa hoe submersibles tsy voafehin'ny olona lavitra, dia karazana robot miasa mahery vaika miasa anaty rano. Masiaka sy mampidi-doza ny tontolo anaty rano, ary voafetra ny halalin'ny fisitrika ataon'olombelona, ​​noho izany dia lasa fitaovana lehibe hampivelarana ny ranomasina ny robot anaty rano. Misy karazany roa indrindra ny submersibles tsy voafehy voafehy lavitra: taribin-tsambo voafehy voafehy lavitra sy submersibles voafehy voafintin'i cableless. Anisan’ireny ny «cabot remot» ...